Layliyo iyo Tababar - Vondt.net - Bogga 4 ee 34
09 / 07 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Miyaad ka xanuunsan tahay garabka? Waa kuwan 5 jimicsi oo Yoga ah oo kaa caawin kara inaad kordhiso dhaqdhaqaaqa garabka iyo yareynta garabka garabka. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof qaba xanuunka garabka.
Jimicsiyada yoga iyo yoga waxay waxtar yeelan karaan markay tahay nasashada muruqyada adag iyo murqaha. Intooda badan badiyaa nolosheenna wax aad u badan ayaa waxay sababtaa muruqyada dhabarka, sinta, dhabarka bowdooyinka iyo kursiga inay aad u adkaadaan. Fidinta joogtada ahi waxay noqon kartaa cabiraad wanaagsan oo looga hortago murqaha adkaanta iyo kala goysyada adag. Waxaan kugula talineynaa in laylisyadaas si wada jir ah loo sameeyo jimicsiyadaan xoogga ah ee qoorta og garbaha awoodda ugu badan.
Jagadan yoga waxay furaysaa booska garabka, waxay kala bixinaysaa muruqyada waxayna si firfircoon u dhaqaajineysaa garabka iyo qoorta. Waa jimicsi heer sare ah oo u baahan kara xoogaa tababar ah ka hor intaadan si fiican u qaban. Ku hay booska 30 ilbiriqsi ka dibna ku celi dhinaca kale. 2-3 nooc.
Maxaan sameyn karaa xitaa haddii aan ka horimaado xanuunka murqaha, dareemeyaasha iyo kala goysyada?
6. Ka hortagga iyo bogsiinta: Sawaxanka cadaadiska sidaas oo kale sidan oo kale ah waxay kordhin kartaa wareegga dhiigga ee aagga ay dhibaatadu saameysey, sidaas darteedna waxay dardar gelineysaa bogsashada dabiiciga ah ee dhaawacyada muruqyada dhaawacmay iyo guntimaha.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Adho-Mukha-Svanasana.jpg?media=1648573622 528 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-09 10:55:242022-03-18 17:26:135 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay xanuunka garabka
3 jimicsi neefsasho oo qoto dheer oo loogu talagalay walaaca
05 / 07 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
3 Jimicsiyada Neefsashada oo Qotodheer Walbahaarka
Ma ku dhibeysaa culeys iyo walaac? Halkan waxaa ah 3 jimicsi oo qoto dheer oo neefsasho ah oo kaa caawin kara inaad naaqusto walbahaarka, walwalka iyo niyadjabka. Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto qof u baahan xoogaa caawimaad ah si aad u murjiso.
Neefsashada waa shaqada kaliya ee otomatiga ah, ama iskiis u taagan, ee aan ka adkaan karno oo aan nafteenna u xakameyn karno. Kuwa ay saameeyeen walaaca iyo walbahaarka badan waxay ogyihiin in neefsashada degdega ah, dhaqsiyaha badan ay ka sii dari karto xaalada uu kujiro isla markaana ay ka dhigeyso wax walboo ku soo boodo oo walwal ah inay si aad ah uga sii darto. Adoo baranaya inaad xakameyso neefsashadaada, waad xakameyn kartaa markaad dareento in culeyska ama walwalka uu bilaabayo inuu la wareego - sidaas darteedna si firfircoon ayuu u yareeyaa heerarka walaaca ee jirka. Farsamada neefsashada wanaagsan ayaa sidoo kale aad muhiim u ah in la yareeyo feedho xanuun og qoorta. yoga waxay kaloo noqon kartaa bedel wanaagsan oo looga hortago walaaca.
- The 3 farsamooyinka neefsashada aasaasiga ah
Maqaalkan, waxaan ku daboolnay 3 farsamooyinka neefsashada ee aasaasiga ah - farsamooyin ay soo saareen Dr Richard Brown iyo Patricia Gerbarg buuggooda «Awoodda bogsashada ee neefsashada»(Guji halkan ama sawirka hoose si aad wax badan uga akhrido buugga)
Mabda'a ugu weyn ee farsamadooda neefsashada aasaasiga ah ee aasaasiga ah waa in la neefsado oo la baxo 5 jeer hal daqiiqo gudaheed. Dariiqa lagu gaari karo tan waa in la qaato neef qoto dheer oo la tiriyaa 5, ka hor inta aan si xoog leh loo soo bixin oo mar labaad loo xisaabiyo 5. Qorayaashu waxay qoreen in tani ay saameyn fiican ku yeelan karto kala duwanaanta heerka garaaca wadnaha ee la xiriira tan lagu dejinayo soo noqnoqoshada sareyso sidaasna diyaar u ah in lala dagaallamo falcelinta walaaca.
2. Neefsashada iska caabin ah
Farsamada labaad ee lagu sharaxay waxay ka neefsanaysaa iska caabin. Tani waa inay jirka ka dhigto mid dabacsan isla markaana gala meel aad u deggan. Farsamada neefsashada waxaa lagu sameeyaa iyadoo si qoto dheer loo neefsado ka dibna laga neefsado afka ku dhowaad xiran - si bushimaha aysan u helin masaafo aad u ballaaran oo ay tahay inaad 'u riixdo' hawada dhanka diidmada. Habka ugu fudud ee lagu sameyn karo 'neefsashada iska caabinta' waa iyadoo la neefsado afka kadibna laga baxo sanka.
3. Dhaqdhaqaaqa qaabka neefsashada
Farsamada saddexaad ee neefsashada, isdhexgalka maskaxda iyo neefsashada ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya - halkan waa inaad ku sawirtaa inaad ku neefsato meel gaar ah oo jirka ka mid ah. Tusaale ahaan. markaad neefta si qoto dheer u neefsaneyso, waa inaad ka fikirto in neefta loo soo jiidayo dhanka garabka bidix ama qeybta midig ee dhabarka hoose.
Kuwani waa layliyo sifiican loo sameeyo oo loo sameeyo jimicsi maalin kasta si saamaynta ugu sareysa loo gaaro. Xusuusnow in neefsashadu ay caqabad noqon karto, sidaa darteed u dulqaado naftaada.
Rullaluuduhu wuxuu noqon karaa aalad waxtar leh oo wanaagsan oo lagu abaabulayo kala -goysyada iyo muruqyada laf -dhabarka. Talo wanaagsan adiga oo u baahan inaad "ku milmaan garbaha garbaha dhexdooda". Saamaynta ugu badan waxaan ku talinaynaa xumbo xumbo this (dhagsii halkan - furitaanka daaqad cusub) kana socota Epitomi.
Sidookale iskuday: - 8 Talo oo Dabiici ah iyo Tallaabooyin ka dhan ah dawakhaad
Sidoo kale aqri: - Xanuunka dhabarka oo hooseeya? Waa inaad tan ogaataa!
Isku day layliyadaan sidoo kale: - 5 Jimicsiyo Wanaagsan oo Lagaga Hortago Sciatica
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Pusteteknikk.jpg?media=1648573622 466 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-05 08:54:142022-03-18 17:25:543 jimicsi neefsasho oo qoto dheer oo loogu talagalay walaaca
Bogga 4 ee 34«<23456>»